Nei iPhone Yangu Bhatiri Yero? Heino Kugadzirisa. - Iphone
ndinogona kurodha maapplication pane yangu iphone
dambudziko rekugadzirisa maapps pane ipad
gadzirisa yangu yakaputsika iphone skrini
iphone 7 screen wont batidza
Nei iPhone Yangu Bhatiri Yero? Heino Kugadzirisa.
Yako iPhone iri kushanda zvakakwana, asi bhatiri icon pane yako iPhone yakangoerekana yashanduka yero uye iwe hauzive nei. Usazvidya moyo: Hapana chakakanganisika nebhatiri rako re iPhone. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone bhatiri yero uye maitiro ekuchinjisa kuti zvidzokere pane zvakajairwa.
Low Power Mode Haisi Iyo Kugadzirisa
Yakadzika Simba Mode haisi yekugadzirisa iyo iPhone bhatiri nyaya - ibhendi-bhendi . Chinyorwa changu chakadaidza Nei Yangu iPhone Bhatiri Inofa Nokukurumidza? anotsanangura sei zvachose gadzirisa matambudziko ebhatiri nekuchinja mashoma marongero pane yako iPhone. Kana iwe uchifamba kwemazuva mashoma uye usingawanzo kuwana mukana wechaja, Amazon inotengesa zvimwe
Yakadzika Simba Mode otomatiki anodzima kana iwe uchichaya yako iPhone bhatiri rapfuura 80%.
Nei iPhone Yangu Bhatiri Yero?
Yako iPhone bhatiri yero nekuti Yakadzika Simba Mode yakavhurwa. Kuti uchinje kuti zvidzokere pane zvakajairwa, enda ku Zvirongwa -> Bhatiri uye tinya switch padyo ne Yakadzika Simba Mode . Yakadzika Simba Mode inodzima otomatiki kana yako bhatiri nhanho yasvika 80%.
Kuwedzera Yakaderera Simba Mode Kudzora Center
Kana yako iPhone iri kuita iOS 11 kana nyowani, unogona kuwedzera bhatani uye chinja Low Power Mode kana kudzima muDirect Center .
Zviri nyore kufunga kuti chimwe chinhu chakakanganisika ne iPhone yako kana bhatiri rayo rashanduka kuita yero. Mushure mezvose, yero zvinoreva chenjedzo kana yambiro mune dzimwe nzvimbo dzehupenyu hwedu. Rangarira kutarisa chinyorwa changu nezve sei kuchengetedza iPhone bhatiri hupenyu kana uchida kudzivirira low power mode zvachose.
Iwe hauna nzira yekuziva kuti yero iPhone bhatiri icon inowanzoitika chikamu cheIOS, nekuti chinhu chitsva chinhu uye Apple haina kupa chero munhu kumusoro. Handizoshamiswa kana Apple ikawedzera hwindo reruzivo rinotsanangura sei iyo bhatiri iPhone bhatiri iri kushanduka yero kune ramangwana vhezheni yeIOS.